China Backpack T-B3140 Kugadzira uye Fekitori | TIGERNU
TIGERNU yakawanda inoshanda fashoni dhizaini bhegi
Unyanzvi: Bhegi rine saizi mbiri dziripo, saizi imwe ndeye 28 * 14 * 41cm (L * W * H), inokwana palaptop inosvika 14 ″ uye imwe saizi iri 31 * 15 * 46cm (L * W * H), inokwana palaptop inosvika 15.6inch.Iyi yakarongedzwa mushe bhegi sarudzo yakasarudzika yekushandisa kwako kwezuva nezuva uye chinangwa chekufamba. chikamu chemberi chemabhuku, mafaera zvichingodaro; maviri kumberi zippered homwe diki, maviri mativi zippered pouches uye imwe yakavanzwa kumashure muhomwe yakanaka kune ako akakosha zvinhu. Iyo zvakare yakawedzera nzvimbo kune ako ezuva nezuva zvaunoda, mabhuku, mbatya, simba kubhengi, headphone uye zvichingodaro.Nemazhinji mawoko, zviri nyore kwazvo kuti iwe uwane izvo zvaunoda pasina kuchera kwakatenderedza.
Kuchengetedzwa maficha: Iyo fashoni bhegi rakagadzirwa nesplashproof & kukwenya kusagadzikana nylon, yakasimba, inogara kwenguva refu uye eco-hushamwari. Iyo yakapetwa kaviri mazino mana ane patendi anokiyiwa zipi inopa yakanyanya kuchengetedzeka pakufamba kwako uye nehupenyu hwezuva nezuva.
Maitiro: Bhizinesi bhegi rine maviri akasungirirwa akagadziriswa mabhande epafudzi uye rakapetwa kumashure mapaneru ayo anokurudzira kufefetera kwekunyaradzwa paunenge uchienda Uye izvo zvinogadziriswa uye zvakanyanya zvakapfekedzwa tambo dzefudzi dzakakwenenzverwa kuita kuti bhegi rive rakasununguka kupfeka kunyangwe rakatakurwa neyako giya.
Chikwama ichi chihombodo chakawanda-chinoshanda, chakakodzera varume, vakadzi, vadzidzi chero chinangwa. TIGERNU bhegi rakanakira chikoro, yunivhesiti, kupera kwevhiki, kufamba pano neapo, majimu, basa rezuva nezuva, bhizinesi, rwendo, musasa uye kukwira makomo.Zvakanakira kushanda sebhegi remabhuku, bhegi rechikoro, bhegi rakasununguka, kabhegi kemabhuku.
Model Nhamba T-B3140
Ruvara: Dema, Girini, Sirivha grey, Grey grey, Kofi
Kurongedza: 20pcs / ctn
Saizi: 14 inches: L28 * W14 * H41cm
15.6 inches: L31 * W15 * H46cm
Inokodzera saizi yelaptop: 14 inches 24 * 33cm / 17 inches 36 * 38cm
Zvinhu: Splashproof & muvare nemishonga 600D * 600D Polyester
Feature: Mubato wakapfava; Kukwanisa kukuru; Splashproof
Pashure: Mukwende T-B3130
Zvadaro: Mukwende T-B3142
yepamusoro fashoni bhegi revarume
mutambo wekuzorora bhegi rekuyaruka
mudzidzi ollege bhegi rechikoro
tigernu hombe yekugona bhegi
Crossbody bhegi T-L5191
Crossboy bhegi T-S8113